Iindaba -INtengiso ye-Super Abrasives yokufikelela kwi-USD 11.48 yezigidigidi ngo-2027
Intengiso enkulu yeArasrasives Ukufikelela kwi-USD 11.48 yeebhiliyoni ngo-2027
Ukonyuka kwemfuno yokuchaneka kunye nezixhobo zoomatshini ngenxa yokunyuka kwemveliso yezithuthi kunye nemisebenzi yokwakha iqhuba isidingo semarike yeSuper Abrasives.
ENew York, ngoJuni 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -Imarike yeSuper Abrasives Market kulindeleke ukuba ifike kwi-11.48 yezigidi zeedola nge-2027, ngokwengxelo entsha ngeeNgxelo kunye neDatha. Imakethi ibona umdla owandisiweyo wokuchaneka kunye nezixhobo zoomatshini bokuvelisa iimoto kunye nemisebenzi yokwakha. Kwimveliso yokwakha, imveliso isetyenziselwa ukwenza ukubhola, ukusika, kunye nokusika izixhobo kumatshini wekhonkrithi, izitena kunye namatye. Nangona kunjalo, ukwanda kokuntsonkotha kwetekhnoloji yokurhabaxa ephezulu ekusebenzeni kokusebenza okuphezulu kunye neendleko zokuqala eziphezulu kwenza ukuba kube nzima kwiinkampani ezincinci kunye neziphakathi ukuba zikhuphisane neenkokheli zentengiso zehlabathi kwaye yiyo loo nto, ziya kuthintela ibango lentengiso.
Ukufudukela ezidolophini okukhawulezileyo kuyitshintshile indlela yokuphila yabantu, kwaye ke, kwandise ukuxhaphaka kwecandelo lokwakha ngeenjongo zorhwebo ngokubanzi; ke, ukongeza ibango kwimveliso yentengiso. Ukuqinisekisa ukugqitywa kwamalungu ngokugudileyo, imveliso isetyenziswa njengesixhobo sokugaya ekwenziweni kweenxalenye zemoto ezinje ngesistim yokuqhuba, ishaft yegiya, iinkqubo zenaliti, kunye nekham / crankshaft. Ukunyusa imveliso yemoto kunye neyombane kulindeleke ukuba inyuse imfuno yentengiso yemveliso kule minyaka izayo. Icandelo ledayimani kulindeleke ukuba likhule ngokubonakalayo, ngenxa yokunyuka kwemfuno yezixhobo ezichanekileyo ezivela kumzi mveliso weemoto kunye nenqwelomoya.
Ukonyusa ukuqonda kweetekhnoloji eziphezulu kunye nezibonelelo ze-abrasives eziphezulu kunegalelo kukonyuka kokuthambekela kwi-abrasives ephezulu. Zisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokuqhekeza nakwimveliso, izakhiwo zokumiswa, amavili, iinjini, iivili kunye nerabha, phakathi kwabanye. Umzi mveliso wemveliso yeemoto kunye neeOOs ezizenzekelayo (abavelisi bezixhobo zokuqala) iakhawunti uninzi lwentengiso yeemveliso ezirhabaxa kakhulu. Uphuhliso olomeleleyo lomzi mveliso weemoto kunokwenzeka ukuba lubangele ukwanda kweemfuno zehlabathi ze-super abrasives.
Ngaphaya koko, ukubonwa kwemveliso ye-abrasives ephezulu iyaqhubeka ikhula, kunye nemisebenzi ekhulayo ye-R & D ekulindeleke ukuba ikhawulezise ukukhula kweshishini elirhabaxa lehlabathi. Kwicala elisezantsi, iindleko eziphezulu ezinxulunyaniswa nazo zinokuthintela ukukhula kweemarike zehlabathi ze-super abrasives. Xa kuthelekiswa nemiqhekezi yesintu, amaxabiso eevili zokugaya ezixabisekileyo aphezulu kakhulu. Ukukhula kweemarike nako kunokuthintelwa kukusilela kobuchwephesha, ukuqonda okungaphelelanga kwiimfuno zabathengi, kunye nabanye abaninzi. Ngenxa yoko, amaxabiso ezinto ezisetyenzisiweyo ekwenziweni kweebrasives ezinkulu zixhomekeke kukwahluka kwendalo, okunokuthintela ukukhula kwemfuno kwixesha eliqikelelweyo.
Impembelelo ye-COVID-19: Njengokuba imeko ye-COVID-19 ikhula, abavelisi bayayitshintsha indlela abasebenza ngayo kwaye bathenge izinto eziphambili ngokubaluleka ukuze bahlangabezane neemfuno zobhubhane, eziye zanciphisa isidingo sezinto ezikhulu zentengiso. Kwisithuba seenyanga ezimbalwa, kuyakubakho uthotho lwezinto ezothusayo nezintle, njengoko abavelisi kunye nababoneleli babo bephendula kubanikezeli beenguqu kwiimfuno. Kwimeko embi yelizwe jikelele, uqoqosho oluxhomekeke ekuthumeleni kumazwe angaphandle kwimimandla emininzi lubonakala lusemngciphekweni. I-Global Super Abrasives Market itshintshiwe ziziphumo zalo bhubhane, kuba abanye abathengisi bayacima okanye banciphise imveliso, ngenxa yokunqongophala kwemfuno kwintengiso esezantsi. Ngelixa ezinye zinqunyanyiswa imveliso yazo ngoorhulumente bazo njengenyathelo lokuthintela ukulwa ukusasazeka kwentsholongwane. Kwimimandla ethile, iimarike zijolise ekubeni zibekho ngokwasekhaya ngakumbi, ngokujonga ubuzaza bokuqhambuka, kunye neziphumo ezenziwa ngabasemagunyeni belizwe ngalinye. Ngaphantsi kwezi meko, iimeko zentengiso kwimimandla yeAsia Pacific ziye zalulwelo kakhulu, zancipha ngeveki, zisenza umngeni ukuzinza.
Ezinye iziphumo eziphambili ezivela kwingxelo zibonisa
Ngokusekwe kwimveliso, iDayimane ibala esona sabelo sikhulu semarike ngo-2019, ngenxa yeepropathi ezinjenge-anti-adhesion, inertness yemichiza, ukungavisisani okuphantsi, kunye nokumelana okungcono kokunxiba.
Umzi mveliso we-elektroniki ubala esona sabelo sikhulu kwimarike, sibambe malunga ne-46.0% yeshishini lilonke ngo-2019, njengoko livelisa izinto ezincinci nezintsonkothileyo ngokunyamezelana okusondeleyo okuhambelana ngokuchanekileyo kumacandelo omatshini, ngaloo ndlela kuyenza ilungele iintlobo ezahlukeneyo zezicelo zePCBs. .
I-Asia Pacific ilawula imarike ngo-2019. Ukugxila okungaguquguqukiyo kwiinkqubo ezingenaxabiso kunye nezintsha ezamkelweyo kule ndawo ziqhuba imarike. Ummandla weAsia Pacific ubambe malunga ne-61.0% yeNtengiso ye-Super Abrasives, elandelwa yiNtla Melika, equlathe malunga ne-18.0% yentengiso ngonyaka we-2019.
Abathathi-nxaxheba abaphambili babandakanya iiRadiac Abrasives Inc., iNoritake Co Ltd., iProtech Diamond Tools Inc., iAsahi Diamond Industrial Co Ltd., i-3M, iAmerican Superabrasives Corp., iSaint-Gobain Abrasives Inc., iCarborundum Universal Ltd., iEagle Superabrasives, kunye ne-Action Superabrasive, phakathi kwabanye.
Ukulungiselela le ngxelo, iiNgxelo kunye neDatha zahlulwe zangaphezulu kwiNtengiso yeSuper Abrasives kwimveliso, umsebenzisi wokugqibela, isicelo kunye nommandla.
Imbonakalo yeMveliso (Umthamo, iitoni zeKilo; 2017-2027) (Ingeniso, i-USD Billion; 2017-2027)
ICubic Boron Nitride / iDayimane / Abanye
Umbono woMsebenzisi wokugqibela (ivolumu, iitoni zeKilo; 2017-2027) (Ingeniso, i-USD Billion; 2017-2027)
I-Aerospace / i-Automotive / i-Medical / i-Electronics / i-oyile kunye neGesi / abanye
I-Outlook yesicelo (Umthamo, iitoni zeKilo; 2017-2027) (Ingeniso, i-USD Billion; 2017-2027)
Powertrain / Bearing / Gear / Tool Ukugaya / Turbine / Abanye
Umbono Wommandla (Umthamo, Iitoni zeKilo; 2017-2027) (Ingeniso, i-USD Billion; 2017-2027)
EMntla Melika / e-US / eYurophu UK / France / Asia Pacific China / India / Japan / MEA / Latin America / Brazil
Ixesha Post: Apr-02-2021